QM oo ka digeysa xad-gudubyada ka dhanka ah carruurta Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
QM oo ka digeysa xad-gudubyada ka dhanka ah carruurta Soomaaliya
Dalka Soomaaliya, ayaa ka mid noqday wadamada ugu sareeya liiska goobaha ay xasaraduhu ka aloosan yihiin ee xad-gudubyada ba'an loogu geysto Caruutrta.
WASHINGTON, USA – Waddamada Soomaaliya, Congo, Afgaanistaan iyo Suuriya ayaa ugu sarreeya liiska dalalka ugu xasaradaha badan adduunya ee caruur ku nooshahay, sida ay Qaramada Midoobay sheegtay Isniintii.
Ku dhowaad 60% dhammaan xad-gudubyada ku cad diiwaangelinta liiska madow ee sannadlaha ah, ayaa qeexaya in carruurta dalalkan ay dhibbanayaal u yihiin xad-gudubyada ba'an, oo ka dhan ah bani’aadan-nimada.
Virginia Gamba, oo ah wakiilka gaarka ah ee UN-ka u qaabilsan goobaha xasaraduhu ka jiraan ee caruurtu ku nooshahay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in carruurta la siiyo badalka colaadaha oo ah nabadda, lana xushmeeyo xuquuqda carruurta.
Virginia Gamba, waxa ay sheegtay inuu kordhay afduubka loo geysto caruurta 90%, marka loo eego sanadihii hore, sidoo kale kororka kufsiga iyo noocyada kale ee xad-gudubka galmada ayaa kordhay 70%.
In kabadan 3,200 oo carruur ah ayaa la xaqiijiyay in lagu afduubay dalalka ay xasaraduhu ka jiraan sanadki 2020, ugu yaraan 1,268 ayaa ahaa dhibanayaal lagula kacay tacadiyada galmada.
Gamba waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay tahay dalka laga diiwaan galiyay xad-gudubyadii ugu badnaa illaa iyo hadda, waxaana inta ugu badan geystay Kooxda Al-Shabaab, oo askareysa carruurta, Dowladda ayaa dhankeeda qeyb ah dhibaatooyinkii la diiwaan galaiyay ee carruurta gaaray sanadkii na weydaartay.
Soomaaliya, sanadkii la soo dhaafay waxaa sare u kacay falalka ka dhanka ah carruurta, waxaana la helay meydka dowr gabdhood oo aan qaan gaarin, kuwaas oo inta la kufsaday hadana si araxan darro ah loo dilay.